Ny sary famantarana ny PSP.
Ny PlayStation Portable na PSP dia azo entina lalao video hampionona fahafito taranaka Sony. Tsy navoaka tao Japana tamin'ny 12 desambra 2004, any Amerika avaratra , ny 24 Martsa 2005 sy ao Eoropa tamin'ny 1 septambra tamin'io taona io ihany. Ny herinandro voalohany ny fanafahana dia natao ny 1 tapitrisa ny varotra. Ny voalohany dikan-PSP dia fehezan-dalàna-ny atao hoe PSP-1000.
1.1 Ara-teknika mampiavaka ny PSP-1000
2.1 Ny Toetra Ara-Teknika
4.1 Ny toetra ara-teknika
Ny PSP 1000 eo amin'ny mainty dikan -.
Ny PSP 2000 mainty version
Ny PSP 3000 eo amin'ny mainty version
Ny Sony nitondra taorian'ny 1.5 (2007) ny fotoana mba hivarotra ny PSP-2000, izay nohatsaraina dikan ' ny PSP-1000. Manan-danja fanatsarana ireo indrindra fa tany amin'ny habe toy ny PSP-2000 dia somary maivana (17%), koa ny tselatra ho fahatsiarovana efa nitombo avo roa heny avy 32 ny 64MB manome safidy maro ny mpandraharaha. Maro, na izany aza, nisy ny fanovana hafa, toy ny manova ny mpandahateny izay no manaraka eo amin'ny efijery, izay nanatsara ny nahazo mazava kokoa sy ny manan-karena loko.
Ny taona 2008 ny Sony nivoaka eny an-tsena ny PSP 3000. Modely io ka telo ny fiovana. Efa tsaratsara kokoa ny lamba, naorina-in microphone satria efa προεγκατέστημενη ny fampiharana ny Skype sy ny bokotra an-TRANO dia anarana mba SAL.
Teo ny tsena ao amin'ny tapany voalohany nahavita hanao an-tsoratra ny varotra sy ny mihoatra lavitra noho izany ao amin'ny global sales karazana tsirairay ny lalao milina azo entina sy tsy (25,39 tapitrisa varotra maneran-tany). Tamin'ny taona 2011 izany dia nosoloina ny PlayStation Vita.
Ara-teknika mampiavaka ny PSP-1000Hanova
Fotoana CPU: MIPS R4000-monina izany? nahavita 1 ny 333 MHz
Fahatsiarovana 32 MB ny Tena Fitadidiana
4 MB nandinika lalina DRAM
Karazana bateria: Liona ' ny 1800 mah
Seranana: USB 2.0, IrDa 5V DC, MS port, Wifi IEEE an'ny 802.11 b (WEP fanafenana:128/64 kely)
Lamba: ny fanapahan-Kevitra: 480x272 teboka (Pixel), 4:3 (16:9)- ny Famirapiratry ny mazava: 200sm/m(200 / 180 / 130 / 80cd/m2)- Loko: 16.77 tapitrisa
Lanja: 280 grama (battery)
Kapila: UMD Fiara
Ny PSP MANDEHANA - in eo anoloan'ny anjara, misokatra
Tamin'ny taona 2009, Sony naka an-tsena ny PSP Mandeha. Ny modely dia tsy hamaky discs UMD fa lalao no azo alaina avy amin'ny Playstation Store. Ny PSP Mandeha tsy fanoloana ny PSP 3000. Indrisy anefa, efa niala avy amin'ny famokarana any ivelan'i Amerika avaratra.
Ny Toetra Ara-TeknikaHanova
Fahatsiarovana 16 na 32 GB ny Tena Fitadidiana
Bateria karazana: ny Liona
Lamba 3.8 santimetatra
USB 2.0 port - headphone Output
PSP eny an-DALANA (E1000) ny mainty version
Tamin'ny 2011, ny Sony niainga ny modely farany ao amin'ny andian-dahatsoratra momba ny PSP. Mba PSP eny an-Dalambe. Ny modely dia tsy maintsy misy WiFi fa afaka milalao discs UMD. Ny Sony nandray ny modely any an-tsena tamin'ny volana novambra 2011. Ny modely mankalaza 99 euro ary ny zava-niala afa-tsy ao Eoropa. Ny volana jona 2012 teo, nivoaka ny loko Ice White.
Ny PlayStation Vita dia ny modely vaovao PSP izay nisolo ny PSP modely 1000-2000-3000-MANDEHANA-E1000. Izany dia azo entina lalao video hampionona ny Sony Solosaina fialam-Boly. Navoaka tao Japana sy ny faritra Azia tamin'ny 17 desambra, 2011. Tsy navoaka tao Eoropa sy Amerika Avaratra tamin'ny 22 febroary 2012, ary ao Aostralia tamin'ny 23 febroary 2012.
Ahitana ny roa analog tapa-kazo, ary manohana Bluetooth, WiFi sy mikasika efijery 5 santimetatra. Koa, tsy voatery 3G. Ny fahatsiarovana no 4, 8 ,16,32 sy 64 GB raha vao ny Slim (PCH-2000) .
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=PlayStation_Portable&oldid=795134"
Dernière modification le 14 Janoary 2017, à 18:30
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2017 amin'ny 18:30 ity pejy ity.